Igumbi elitofotofo elinegumbi lokuhlambela labucala 🏡
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAnna
Indlu epholileyo ejikelezwe buhlaza. Ifanelekile ukuchitha iintsuku ezimbalwa ujikelezwe yindalo, izilwanyana kunye nokutya okulungileyo okanye ukuvuselela emva kohambo olude. Amagumbi akhoyo anokuba nebhedi enkulu eyi-1 ukumkani okanye iibhedi ezi-2 ezingatshatanga.
Indlu iyamkeleka kakhulu, igcwele izinto kunye neenkcukacha ezenza ukuba ibe yodwa. Amagumbi makhulu kwaye akhanya kakhulu njengoko enethamo okanye ifestile enkulu.
Indawo egqibeleleyo yokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile, ukonwabela ubomi obusempilweni obungqongwe buhlaza kunye nokuzola. Kummandla okufutshane kukho ifama "Il gallo larino" eyamkela kuphela iintlobo zezilwanyana ezisengozini. Ngaphezu koko, le ndlu ibekwe kwindawo yobuchule phakathi kolwandle, iintaba kunye namachibi anokufikelelwa ngaphantsi kweyure. Ngelixa imizuzu eli-15 ngemoto, ungandwendwela uninzi lweelali ezidumileyo eItali njengeBoville Ernica kunye neCastro dei Volsci. Isola del Liri, Casamari, Arpino, Roccasecca kunye nezinye ezininzi ... Kukho nje ukufunyanwa!
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho unganxibelelana nomama ukuba ukhona ekhaya okanye whatzap, e-mail kunye nomnxeba 3477165397, nangayiphi na into eyenzekayo.